Kpọ Europe site na Spain ugbu a dị ọnụ ala | Gam akporosis
Fromkpọ oku na Spain gaa Europe ugbu a dị ọnụ ala
Edere Ferreno | | Noticias, Ndị ọrụ ekwentị
Afọ ole na ole gara aga ịgagharị gafere na European Union. Nzọụkwụ mbụ dị mkpa maka ndị ahịa. Ọ bụ ezie na Europe setịpụrụ onwe ya ebumnuche nke belata ọnụahịa nke oku n'etiti mba ndị dị n'otu ahụ. Ihe nke ugbu a na-abụ eziokwu na ihe ọhụụ ọhụrụ abanyela n'ike. Site ugbu a gaba, Kpọ oku na Spain na mba EU ndị ọzọ adịlarị ọnụ karịa.
Ọ bụ ya mere, ndị ọrụ niile na Europe ga-edozi ọnụahịa ha ugbu a. Ọnụahịa ndị mba ụwa na-akpọ maka ndị mmadụ ga-adị ọnụ ala. Kemgbe Mee 15, ọnụahịa ọhụrụ ndị a adịlarị ike, nke bụ 23 cents kwa nkeji, maka oku. Mgbe SMS na-anọ na 7 cents kwa ozi ederede.
Mgbanwe a a na-ewebata bụ ihe na-akpaghị aka, yabụ onye oru aghaghi ime ihe obula iji nweta ọnụahịa ọhụrụ a. Ọ bụ ezie na onye ọrụ ahụ kwesịrị ịgwa onye ọrụ banyere mgbanwe ọnụahịa a. Maka nke a, enwere ike ịnata ma ọ bụ ziga ozi na-ezi ozi gbasara ọnụego ọhụrụ ndị a na Europe. Tụkwasị na nke a, a na-atụ anya ka ọnụego ọhụrụ ndị a dakọtara na onyinye ndị ọzọ ndị ọrụ na-enye.
Ọbụghị naanị mba ndị dị na European Union na-erite uru na mgbanwe a. Mba ndị ọzọ, nke nwere nkwekọrịta akụ na ụba dị iche iche na EU, ma ọ bụ nke dị na European Economic Community, so, na-eche maka ụfọdụ dịka Iceland ma ọ bụ Norway. Ndepụta nke mba dị iche iche bụ ndị a: Germany, Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Denmark, Slovakia, Slovenia, Estonia, Finland (tinyere Aland Islands), France (gụnyere Martinique, Guadeloupe, Saint Martin, French Guiana , Reunion na Mayotte), Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Netherlands, Poland, Portugal (yana Madeira na Azores), United Kingdom (gụnyere Gibraltar), Republic Czech , Romania na Sweden.
N'ihe banyere Spain, ndị isi ọrụ ekwuputala ọkwa ọhụrụ nke ahụ sitere na ugbu a gawa. Yabụ ndị ọrụ amaraworị ego ha ga-akwụ mgbe ị na-akpọ oku na mba ndị ọzọ na Europe. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ oge dị mkpa, ọkachasị ugbu a oge ọkọchị na-eru nso ma ọtụtụ mmadụ na-aga njem, ka ha wee nwee ike kpọtụrụ ndị enyi ha ma ọ bụ ezinụlọ ha n’ụzọ dị mfe.
Ọnụego ndị ọrụ Spanish
Na Spain anyị na-ahụ ọtụtụ ndị isi ọrụ ma ọ bụ otu dị iche iche, nke na-eweta ọnụahịa yiri nke a n'ọtụtụ oge. A na-agbanwe ha mgbe niile na ọnụahịa ọhụrụ ndị a ga-eji na Europe. N'ihe banyere SMS, ọ ga-abụ na ị ga-ahụ ọnụahịa nke 7,26 cents, ọ bụ n'ihi na n'ọnọdụ ndị a etinyelarị VAT na ọnụahịa ahụ. Ebe ọ bụ na nke kacha elu nke EU gụnyere VAT (na ọnụọgụ 7 ndị ahụ anyị hụburu). Ndị a bụ ọkwa ọhụrụ:
Grupo Movistar (kwa O2, Simyo): 22 cents nke oku oruru. Oge mbu dị ọnụ ahịa na 1 cent na 23 cents kwa nkeji maka oku fọdụrụ. Ozi ederede 7,26 cents kwa SMS.
Vodafone: 21 cents nke ntinye oku. 1 cent maka nkeji mbu na 22 cents kwa nkeji maka oku fọduru. Ozi 7 cents maka SMS ọ bụla.
obere: ntọala oku bụ n'efu na 20 cents kwa nkeji na oku niile. Ozi ndị ahụ nwere ọnụ ahịa nke 7 cents kwa SMS.
Orange, Yoigo, Jazztel, Amena, República Móvil na MásMóvil: 23 cents maka nhazi oku. Oge mbu enweghị ụgwọ (0 cents nkeji mbụ) na 23 cents kwa nkeji maka oku fọdụrụ. N'ihe banyere ozi 7,26 cents kwa SMS.
Google Fi: Onye ọrụ Google na-akwadebe ịbanye Europe
Ndị a bụ ọnụahịa ọhụrụ anyị nọ ugbu a na Europe. Yabụ ọ bụrụ na ị kpọọ ndị enyi ma ọ bụ ndị ezinụlọ bi ma ọ bụ na-eme njem na mba ọzọ na kọntinent ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta na oku ndị a adịchaghị ọnụ ala. Kedu ihe ị chere maka ọnụego ọhụrụ ndị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Fromkpọ oku na Spain gaa Europe ugbu a dị ọnụ ala
Samsung Pay nwere ihe ruru nde mmadụ iri na anọ na mba iri abụọ na ise
Realme X: premiumdị ọhụrụ ọhụụ ọhụụ ahụ